Ezipta: Very Bolongana Ry Ezipsiana mpamahana azy · Global Voices teny Malagasy
Ezipta: Very Bolongana Ry Ezipsiana mpamahana azy
Voadika ny 03 Desambra 2008 20:08 GMT
Maro amin'ny mpamaham-bolongana Ezipsiana no very bolongana… Moa ve niniana naaton'ny mpampiatrano vohikala ireny bolongana ireny sa misy tanana tsy hita maso milalao any ambadiky ny sehatra?
Tsy hitan'ilay Ezipsiana vavy Epitaph ny bolongany tamin'ny volana oktobra. Andro vitsy taorian'izay dia nanao izao fangatahana manaraka izao tany amin'ny Blogger mpampiatrano vohikala ny mpamaham-bolongana Mohamed Al Gohary na President IRC miaraka amin'ny mpamaham-bolongana Ezipsiana 20 hafa, ary toy izao ny votoatin'izany fangatahana izany:
Izahay dia vondrona mpamaham-bolongana Ezipsiana mahatsiaro ho tohina tokoa amin'izao fanakanana mahazo ny bolongana efa nofahanana nandritra ny roa taona “Epitaph_87″ ( http://www.epitaph-87.blogspot.com/) miaraka amin'ny mailaka gmail nananany (epitaph87@gmail.com), hatramin'ny 4 Oktobra 2008 lasa teo. Efa nilaza ny olana mianjady aminy tany amin'ny Google Help Center sy tany amin'ny Blogger Support izy saingy niandry vasoka. Manantena izahay fa hanampy anay hamerina io bolongana io sy ny mailakany ianareo hamaly ny hetahetan'io mpamaham-bolongana vavy namanay io any amin'ny (epitaph_1987@hotmail.com), ary haingana araka izay azo atao!
Tamin'ny 16 Novambra lasa teo indray dia nanoratra ny amin'ny fanjavonana bolongana faharoa i Tarek Amr avy ao amin'ny Global Voices Online:
Hita ankehitriny fa tsy ny tany andalam-pandrosoana ihany no manakana ny bolongan'ny olona. Tarataratra fa tahaka ny manaraka izany fomba ratsy izany ihany koa ny Blogspotn'ny Google, ary dia nosakanany tsy nisy antony mazava ihany koa ny Bolongan'i Nawara Negm (Tahyees [Ar]).
Ankehitriny dia nanoratra momba ny bolongana iray hafa nanjavona ihany koa i Ahmed El Sabbagh:
وبعد شوية لقيت مدونة وينكى اتحذفت تماماُ. موقف مؤسف جداً أصبح من الوارد أن نتعرضمدونة وينكى له فى أى لحظة. أعلم إن حذف المدونة ليس نهاية العالم وأن وينكى .. بروحها الجميلة تستطيع أن تنشئ مدونة أجمل لكن الموضوع أصبح مؤلم وسئ جدا. أحمد البوهى إقترح ان نرسل جميعا رسالة الى بلوجر يوم 10 ديمسبر
Nofoanana ny bolongan’i Winky. Toy ny miatrika toe-javatra mampahonena mitovy hatrany isika. Ekeko fa tsy hoe izay akory no faran'izao tontolo izao raha foana ny bolongana iray, ary mbola afaka mamorona bolongana tsaratsara kokoa hafa indray i winky, amin'izato toetrany maha-te-ho-tia, saingy tsy tokony hionona amin'izao ihany koa isika. Manao izao sosokevitra izao i Ahmed El Boohy mba handefa izao hafatra manaraka izao any amin'ny Blogger isika amin'ny 10 desambra:
Mpamaham-bolongana Ezipsiana izahay. Miangavy indrindra re mba tsy hofoanana tsy amin'ny antony na idirana an-tsehatra any amin'izay navoaka raha tsy nisy ny fandikana ny fifanarahana. Miangavy indrindra re mba aoka tsy handray ny toeran'ny mpanaramaso tsy mendrika manoloana ny bolonganay. MIANDRY VALINY IZAHAY.
Ary dia nanoratra ny fandraisana fepetra manokana ho fiarovana ihany koa izy ka nanoro ny handikana ny dika mitovy ny bolongana ao amin’ny solosaina:
Ankehitriny dia efa afaka manao dika mitovy ny bolonganao amina endrika dosie ao amin'ny solosainanao ianao ary afaka maka an'io raha sanatria tonga izay olana amin'ny bolonganao. Toy izao avy ny dingana arahina:
Sokafy ny drafitry ny Blogger rehefa tonga eo amin'ny fandrindrana ianao ary dia hahita rohy milaza hoe “Make Blogger in my default dashboard” ianao.
Safidio io ary mankanesa any amin'ny fandaharana (settings), manana safidy telo ianao eo: Import Blog – Export Blog – Delete Blog
Safidio ny Export Blog mba hamoronany dosie ao amin'ny solosainanao, ka raha tonga ny sanatria (olana) dia afaka mampiasa ny alaivo (Import) ianao hiverenan'ny bolonganao.
Fa nizara tamintsika ny tsiambaratelo ambadik’izao fanjavonana bolongana i Bella:
Nanokatra ny mailako toy ny mahazatra aho ka nahita ny hafatra avy amin'ny ekipan'ny Gmail amin'izato lohateny manaitra mampitandrina ahy fa ho very ny fisoratako anarana (mailaka) sy ny bolongako. Ary dia nisy rohy moa nolazainy mba hotsindriana. Nangovitra aho na dia mieritreritra ny hahavery ny bolongana fotsiny aza na dia manana ny dika mitovy any amin'ny WordPress aza, nanontany ny hevitry ny namana iray aho. Soa ihany fa nahita an'i Mohamed El Gohary teo an-tserasera aho tao amin'ny MSN ary dia nalefako tany aminy ny dika mitovin'ny hafatra azoko. Nolazainy ahy ary fa fandrika (scam) fampiasan'ny mpisovoka io mba hahazoany ny mailakanao sy hanafoanany ny bolonganao miaraka amin'ny votoatiny.